Kunama umkhumbi - kuphambene side ukuthi kusukela lapho notshwala emoyeni ukuya. Ngo imikhumbi asekhanda umoya (ngokuqinile ngokumelene ukunyakaza emoyeni uquqaba), ngakho kungase kudinge ebhodini, owayesesimweni umoya phambi angenise lesi sikhundla.
Hals - kuyinto isiqondiso isihlobo umoya bomkhumbi. Ngokomthetho ezimbili okufanele akhethe kuzo: kwesokudla noma kwesokunxele. Esikhathini umkhuba Russian kukhona umqondo lomunye tack, okubonisa isikhundla umkhumbi nomoya fair. Main useyili - sivale indlela engena emgedeni - kulokhu elise ohlangothini windward. uhlangothi Kunama kulokhu kunqunywa lokuthola mainsail. Uphi useyili omkhulu, futhi lukhona nalo. Eqinisweni, uma uhambisa ngakho downwind libizwa ohlangothini windward.
Lapho jibe ukunyakaza isilinganiso (ovunguzayo isiqondiso - kukhona ngokuqinile aft) isikhundla kwi Kunama ohlangothini lwawo lokuya eMelika ngomkhumbi kunqunywa, njengoba kunjalo nomuntu tack okunye.
Kukhona iinkhundla eziningana isihlobo nomunye ukufinyelela eziningi yezikebhe:
Esimweni lapho isidumbu umkhumbi uyisiphetho iphuzu lomunye, owokuqala kucacile phambili, kwesibili - ecacile astern. Lapho isikebhe esisodwa ligamanxa omunye, kuthiwa ukuxhunyaniswa. Kulesi sikhundla, lee nguye ongasohlangothini windward bomkhumbi abafanele. Wabuye unelungelo ukuhamba, t. E. Kumelwe akhale.
I yemvelo landscape
EsiseLeeward uhlangothi - ke Kukude umoya ensimini. Umehluko ephawuleka kakhulu phakathi kwemithambeka okuphambene ezintabeni. Njengomthetho, ivikelwe emiphumeleni emoyeni uquqaba endaweni abe sezulu yezwekazi, t. E. Kuyinto kushisa kakhulu ehlobo nasebusika kukhona yesithwathwa ezinzima. Kukhona ezinkulu yezinkathi ezithile lokushisa ekushintshashintsheni.
Siyabonga lokuvikeleka kwezifiso ezisemqoka entabeni nemithambeka, imvula kule mikhakha esingaphansi ezithinta imisebenzi yezolimo abantu ababehlala lapho.
Kunama iwela "isithunzi imvula", kusale kuwo ngokuvamile ezomile kakhulu. Downdraft ukuthi ziwile ngokusebenzisa entabeni, kushisa, ngakho-ke le ngxenye landscape zinomoya efudumele. Bayamthonya ngesikhathi esifushane kakhulu zinyamalale ungqimba obukhulu kweqhwa. Ushintsho olunjalo abukhali sezulu kungabangela Ukuwohloka isimo sempilo kwezinye abantu.
Naphezu kwakho konke lokhu, isimo sezulu entabeni kuhle empilweni. izikhungo izivakashi eziningi, Spas kanye zokungcebeleka ise endaweni enezintaba.
Reiter Syndrome: ukuthola ikhambi
Usawoti Iodized. Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka kasawoti iodized